ရင်တွင်းဖြစ် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Posts Tagged "ရင်တွင်းဖြစ်"	5
Comments By Postသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - awra-choမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အလင်း ဆက် - စနေ“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - kyeemite - kaiလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - weiweiသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - kaiဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - awra-cho - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - kai - kaiရွာသူ/သားများ အတွက် - awra-cho - Munetez``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - weiweiမကြာမီအချိန်အတွင်း ကမ္ဘာ့ပတ်လမ်းကြောင်းထဲ၌ ဂြိုဟ်တုများ လောင်စာဖြည့်တင်းနိုင်တော့မည်လော - မင်းမင်းပြင်းထန်သော အဆုတ်ရောဂါကို ကုသနိုင်မည့် နာနိုဆေးပညာ - မင်းမင်း - Ma Maရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - weiwei - ရွှေတိုက်စိုးအတု - Munetez - မောင် ပေ``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - Ma Ma - padonmarအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - Ma Ma - အရီးခင်လတ်Comment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - Ma Ma - အလင်း ဆက်နားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - Munetez - Munetezမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - black chawသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - Ma Ma - အရီးခင်လတ်အဟံ ပထမံ - padonmar - natureမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - padonmar - အလင်း ဆက်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - အလင်း ဆက် -etone၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Ko chogyi - Mr. MarGaဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - မောင် ပေ - အရီးခင်လတ်လူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - မောင် ပေ - Mr. MarGaသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - naywoon ni - kyeemiteရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - Mr. MarGa - kyeemiteအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67420 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66910 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59111 Kyats )MaMa (57965 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...